Ikhaya elipholileyo lihlala kwindlu enezixhobo ezifanelekileyo
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguMuthu
Indawo yam ilungile kubantu abafuna ukuhlala kwisixeko saseKaraikudi kwaye bahlolisise iibhotwe zase-Chettinad kunye neendawo ezizungezile ezifana neetempile zaseKunrakudi kunye nePillarpatti. Indawo yam ilungile kumaqabane, abahambi bebodwa, abahambi ngezoshishino, iintsapho (kunye nabantwana), kunye namaqela amancinci.
Indlu iyilwe kakuhle ukuba ibe nokukhanya okuninzi kunye nokujikeleza komoya. Indlu ixhotyiswe ngethiyetha yaseKhaya, ikhitshi elayishiweyo ixesha elide lokuhlala (imifuno kunye neziqhamo zingabandakanywa), indawo eninzi yokulala kunye nendawo yokugcina, amanzi amatsha, iindawo zokupaka iimoto kunye neebhayisekile, indawo evulekileyo, i-balcony, i-terrace kunye nayo yonke into onokuyidinga. uzive usekhaya ngexesha lokuhlala kwakho. Sine-USB generator incase of power ukuvalwa.
Ummelwane uzolile kwaye unobuhlobo. Sinezalamane nezihlobo zethu ezihlala kwindawo ekufutshane kwaye ziyafumaneka ukuze zincede undwendwe xa lufuneka.
Umbuki zindwendwe ngu- Muthu
I am helpful person But I like always peaceful
Ndihlala kufutshane kakhulu kule ndlu kwaye ndinabantu abongezelelweyo bokuncedisa undwendwe ngexesha lokuhlala kwabo. Ke ndicela unditsalele umnxeba nangaliphi na ixesha kwifowuni yam ngayo nantoni na onokuyidinga ngexesha lokuhlala kwakho.
Ndihlala kufutshane kakhulu kule ndlu kwaye ndinabantu abongezelelweyo bokuncedisa undwendwe ngexesha lokuhlala kwabo. Ke ndicela unditsalele umnxeba nangaliphi na ixesha kwifowuni…